२ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृत्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त…. – List Khabar
Home / समाचार / २ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृत्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त….
२ युवतीले बोलाएर ए’कान्तमा भेट्न गएका युवकको मृत्यु, पछि पो थाहा भयो युवतीहरुले त….
admin December 22, 2021 समाचार Leaveacomment 100 Views
वास्तवमा, कलेजका २० वर्षीय विद्यार्थी प्रेमकुमारलाई रे’डहि’ल्स नजिकै एउटा स’मुह’ले घटना घटाएको थियो। प्रेमकुमारमाथि ह’म’ला भ’एको देखेर उनका साथीले घटनास्थलबाट भा’गे’र अभिभावकलाई खबर गरेका थिए । यस घटनामा प्रेमकुमारको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि प्रेमकुमारका आफन्तले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
जब प्रेमकुमारले कथित रूपमा थप पैसा मा’गेका थिए, केटीहरूले उनलाई रे’डहि’ल्सको एकान्त ठाउँमा आउन भने। प्रेमकुमार आइपुग्ने बित्तिकै उ’क्त स’मु’हले उनलाई घे’रा हा’ ‘ल्यो र उसले केहि बुझ्नु अघि नै प्रेमकुमारलाई आ’क्र’म’ण ग’र्न था’ल्यो। उनीसँगै गएका उनका साथी भा’गे’र आमाबुवालाई खबर गरेका थिए ।
Previous घुँडामा स’मस्या भएका व्यक्तिले गर्दै नगर्नुहोस् यी गल्ती, नत्र हुन्छ हड्डि खप्टिने जो’खिम
Next काे-राेनाको खोप लगाएका व्यक्तिको मृ-त्यु, खोपकै कारण मृ-त्यु भएको पुष्टी !